အင်းးးးဘာလိုလိုနဲ့ သုံးနှစ်ပြည့် သွားပြန်ပြီ။နှစ် နှစ်ပြည့်ခါနီးမှာ စီနီယာဖြစ်သွားတဲ့ သားသား။အခု ဒီနေ့
သုံးနှစ်ပြည့်ပြီ။တိုးတတ်လာတာပြောမယ်ဆို စာဖတ်ဝါသနာ ပါတယ်။စာတော်တော်များများဖတ်နိုင်တယ်။
စကားပြောရင် edwin လို့ သူ့ကိုယ် နာမ်စားသုံးတယ်။ဒီနှစ်တော့ သားလေးမွေးနေ့ကို သူ့ကျောင်းမှာ
(တို့လိဲု၃၀ကျော်ကျတော့ မရေ နိုင်တော့လို့ အခု တစ်ချောင်းပဲထွန်းတော့တယ်။)...
♫ ♪ ♫ ♪.........HAPPY BIRTHDAY TO YOU...........HAPPY BIRTHDAY TO YOU...........♫ ♪ ♫ ♪
HAPPY BIRTHDAY♫ ♪ ♫ ♪HAPPY BIRTHDAY♫ ♪ ♫ ♪HAPPY BIRTHDAY TO EDWIN
ဒီအောက်ကပုံကဟိုတလောကရိုက်ထားတာ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဝတ်ထားလဲဆို။အဲနေ့က CCK ကိုသွားတယ်။
CCK အပေါ်ထပ်ကကစားကွင်းရောက်တော့ ရေသွားဆော့တယ်။အဝတ်အပိုမပါဘူး မဆော့နဲ့ ဆိုတာ။
ဆော့တော့ ရေစိုကုန်တယ်။Kiddy palace မှာသွားဝယ်ရင်ရပေမယ့်၊သူ့မှာ အင်္ကျီတွေများနေလို့
ဝယ်မပေးချင်ဘူး။အဲတော့ ကိုယ့်အတွက်ဝယ်လာတဲ့ အင်္ကျီကို ဝတ်ပေးလိုက်ပြီး ကိုယ့် ဆံညှပ်နဲ့ စီးပေးလိုက်
တယ်။အပြန်တစ်လမ်းလုံး ကိုယ်တို့တို ပြုံးစိစိနဲ့ ကြည့်ကြတယ်။
Posted by JuneOne at 9:31 PM
Mon Petit Avatar June 1, 2011 at 10:10 PM
HappY BirthdaY Thar Thar!!!
THET NANDAR FAMILY June 1, 2011 at 10:21 PM
♫ ♪ ♫ ♪....Happy Birthday to you...! ♫ ♪ ♫ ♪........Happy Birthday to you...! ♫ ♪ ♫ ♪........Happy Birthday Dear. Edwin...! ♫ ♪ ♫ ♪........Happy Birthday to you...♫ ♪ ♫ ♪....!
JuneOne June 1, 2011 at 10:32 PM
thanks,♫ ♪ ♫ ♪ ဟာလေး TND ဆီကနေ copy ယူလိုက်ပြီ
khin oo may June 2, 2011 at 12:33 AM
ချစ်စရာလေး happy birthday edwin
Rita June 2, 2011 at 8:52 AM
သူ့ကိုယ်သူ နာမည်ထည့်ပြောတယ်ဆိုတာ ချစ်စရာလေး။
မေမေ့အင်္ကျီကြီး မတော်ဘဲ ယူဝတ်ထားတာလည်း ချစ်စရာလေး။
သားသား ဘာလုပ်လုပ် ချစ်နေတယ်။ :*
သစ်သစ် June 2, 2011 at 9:19 AM
မနေ့က သားသားမွေးနေ့ကို သတိရနေမိတယ် ... ဒါပေမယ့် ဘလော့လင့်အလွတ်မရလို့ မလာနိုင်ခဲ့ဘူး.... ဟက်ပီးဘတ်ဒေး သားသားရေ.... မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ...
JuneOne June 5, 2011 at 10:24 PM